Yakavanzika Policy-Kicheni Faucets, Pot yekuzadza, Bathroom Faucets
Wowowfafaucet.com inounganidza sei ruzivo nezve ini?
Isu tinotora ruzivo kubva kune vashandisi veSaiti nenzira dzinoverengeka dzakasiyana, nechinangwa chekupa unoshanda, uine chinangwa uye wakasarudzika ruzivo rwekutenga. Semuenzaniso, tinogona kushandisa ruzivo rwako pachako ku:
* Rekodha uye nekukurumidza uuye neruzivo rwawakambopa kare
* Batsira iwe nekukurumidza kuwana ruzivo, zvigadzirwa, uye masevhisi
* Gadzira izvo zvinoenderana newe
* Kuzivisa iwe nezveedu idzva ruzivo, zvigadzirwa, uye masevhisi
Kunyoresa uye Kuhodha: Kuti ushandise zvimwe zvikamu zveSiti ino kana kuodha zvigadzirwa, vatengi vese vanofanirwa kuzadza fomu rekunyoresa repamhepo neruzivo rwemunhu, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kune, zita rako, murume kana murume, kutumira uye kero yekubhadhara (es), runhare nhamba, email kero, uye kiredhiti kadhi nhamba. Uye zvakare, tinogona kukumbira yako nyika yekugara uye / kana nyika yesangano rako, kuti tikwanise kutevedzera inoshanda mirau nemirau. Ruzivo urwu rwunoshandiswa kubhadhara, kurongeka kugadzirisa uye kushambadzira kwemukati pamwe nekutaurirana newe nezve yako odha uye yedu saiti.
Email Kero: Nzvimbo dzinoverengeka pane iyo Siti dzinokubvumidza iwe kuti uise yako kero yeemail kune zvinangwa zvinosanganisira asi zvisingagumi kune: kunyoresa kwemahara ekushambadzira ziviso, kukumbira kuzivisa kana mhando nyowani kana zvigadzirwa zvechigadzirwa zvinosvika, kana kusaina kune yedu email tsamba. Pamusoro pezvo, chero kutora chikamu mumakwikwi ekusimudzira akarongwa neWowowfaucet.com ndeyekuzvidira zvachose uye kunoda kuburitsa pachena kweruzivo rwemazita runodiwa kuzivisa vanokunda uye mibairo. Tinogona kutumira mazita nemaguta evamakwikwi ekukunda pane yedu saiti.
Chigadzirwa Ongororo: Tinokumbira kero yeemail uye nzvimbo pamwe nekutumirwa kwese kuongororwa kwechigadzirwa. Yako email kero ichave yakavanzika, asi yako nzvimbo ichaonekwa kune vamwe vashandisi. Rumwe ruzivo rwese rwega rwekuti iwe rwaunosarudza kuendesa sechikamu chekuongorora ruchawanikwa kune vamwe vashanyi veSiti.
Wowowfafaucet.com anoshandisa sei ruzivo rwangu?
Yemukati Shandisa: Isu tinoshandisa yako ruzivo rwemunhu kugadzirisa yako kadhi uye kukupa iwe nevatengi basa. Tinogona kushandisa yako ruzivo rwemukati mukati kuunganidza ruzivo rwese nezve vashanyi kune ino saiti, kugadzirisa saiti uye kugadzirwa, kugadzirisa kwedu kuita, uye kutengesa masevhisi edu uye zvigadzirwa.
Kukurukurirana newe: Isu tinoshandisa ruzivo rwako pachako kuti titaure newe nezve yedu saiti nemirairo yako. Vatengi vese vanofanirwa kupa email kero kubvumidza kutaurirana neWowowfaucet.com maererano nemirairo yakaiswa. Tinogona kukutumira email yekusimbisa mushure mekunge wanyoresa nesu pamwe nezviziviso zvine chekuita nebasa sezvazvinofanirwa (semuenzaniso, kumiswa kwechinguva chidiki chebasa kuitira kuchengetedza. Iwe unogona kuitawo yako email kero kukumbira ziviso kana tagamuchira chinyorwa chitsva, dhizaini chigadzirwa kana chigadzirwa, kana kusaina yedu email email tsamba uye inokosha inopihwa. Iwe unogona kuzvitsaura kana kusarudza kubuda mune emaimeri nguva chero nguva.